Wekan: chishandiso che manejimendi ekugadzirwa kwekuyerera | Linux Vakapindwa muropa
Wekan ndizvo yemahara uye yakavhurwa sosi application zvichibva papfungwa yeKanban izwi rechizvarwa cheJapan rinoreva "kadhi" kana "chiratidzo". Iyi ipfungwa kazhinji zvine chekuita nekushandiswa kwemakadhi (post-it nevamwe) kuratidza kufambira mberi kwekugadzira kuyerera mumakambani ekugadzira mashoma.
NaWekan tinogona kubata zvakamirira mabasa pamakadhi nemabhodhi. Makadhi anogona kufambiswa pakati peMazhinji Columns. Mabhodhi anogona kuve nenhengo zhinji, achibvumira kubatana kuri nyore, ingo wedzera munhu wese anofanirwa kukwanisa kushanda newe pabhodhi.
1 Nezve Wekan
2 Zvimiro zveWekan
3 Maitiro ekuisa wekan paLinux?
Se inogona kugovera mavara akasiyana-siyana kumakadhi kuti zvive nyore kuronga uye kusefa, zvakare, iwe unogona kuwedzera nhengo kukadhi, semuenzaniso, kupa basa kune mumwe munhu.
Inotarisirwa sosi yakavhurika, yakasarudzika-yega imwe nzira kune WorkFlowy kana Trello, iyo inopa anenge akafanana maficha, sezvo iri basa rinonyanya kubatsira kuwedzera kugadzirwa kana uchishanda munzvimbo yekudyidzana.
Wekan ine inoteerera inoteerera yewebhu interface, uye inoshandurwa nemitauro yakawanda.
Chirongwa inobvumira manejimendi kuti agadzire runyorwa rweveruzhinji uye akazvimirira mabhodhi, iyo yakaiswa kumusoro kwepeji peji.
Zvakare iyi app Iyo yakagadziriswa mune inoteerera dhizaini kuti ikwanise kuishandisa yakazara skrini kana hwindo pakombuta pasina mabhatani ebrowser uye panhare mbozha.
Iyo ine manejimendi uye kumisikidzwa kwenhengo dzaunogona: kugadzira, kudzima, kumbomira, kugadzirisa, kugovera mvumo nekudzvanya pazita rako rezita mukona yepamusoro yekurudyi.
Iwo makadhi anogona kugadziridzwa pakati pawo iwe aunogona kugadzirisa: iyo tsananguro, ipa inogadziriswa marongedzero, zvinyorwa zvekutarisa, mifananidzo uye zvakabatanidzwa, makomendi, dura, kudzima uye kudzoreredza.
Uyewo Iyo ine yechokwadi sisitimu, yehutungamiriri pani, uye mukana wekugadzirisa SMTP.
Neye SMTP yekumisikidza, kuzvinyoresa pachako kunogona kuitwa kubva kunyorera, kana kushandura kukoka chete uye kukoka vashandisi kumisangano.
Kugadziriswa kweSMTP kunotsigira zvinotevera:
Sandstorm chikuva, LDAP maneja, isina password email, SAML, GitHub, uye Google Auth.
Maitiro ekuisa wekan paLinux?
Si unoda kuisa here chishandiso ichi mune yako system tine nzira dzinoverengeka dzekumisikidza, yatinoshandisa iyo yakapusa uye nekudaro tichidzivirira kuwana nguva yekunyora kunyorera kubva kune yayo kodhi kodhi.
Muchiitiko chaDebian pane homwe yakatogadzirwa kareKunyangwe isiri yepamutemo sezvo isingabvi kune vanogadzira inongogumira kune makumi matanhatu nemasere-masisitimu.
Kuti tiise iyo muhurongwa isu tinofanirwa kuita anotevera matanho.
Isu tinoisa kutsamira uku:
Si Ivo vari kushandisa Debian 7 mune ino kesi chete isu tinofanirwa kuwedzera zvinotevera:
Ye Debian 8 uye Debian 9:
Finalmente isu tinoisa iyo application mune yedu system ne:
Para avo vanoshandisa Docker vanogona kuisa chishandiso uyu murairo:
Kune mamwe ese ekuparadzirwa kweLinux, tinogona kuiwana Kana iwe uri kushandisa Snap tekinoroji iwe unogona kuiisa nemirairo iyi:
Iwe unogona kudzokorora kumisikidzwa kwaungaite kuti ushandise chishandiso nenzira iri nani nekuverenga zvishoma nezve zvinyorwa mukati Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Wekan: kunyorera kwe manejimendi ekugadzira kuyerera
Iridium Browser: Bhurawuza rine hanya nezve kuvanzika kwemushandisi